Xaaladda badda waqooyiga Iswiidhen oo ka soo dareysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaaladda badda waqooyiga Iswiidhen oo ka soo dareysa
La daabacay fredag 12 juli 2013 kl 10.25
Buundada Xeebta Dheer (Höga kusten). Sawirle: Anders Wiklund / SCANPIX
Waxaa dhibaato weyn ka taagan kiimikada lagu daadiyo badda waqooyiga Yurub oo loo yaqaan Östersjön, taas oo khatar ugu sugan in waxa bad hoosteeda ku jira ay dhintaan. Waxaa hadda la qorsheynayaa in kalluun lagu beero badda iswiidhishka loo yaqaan Höga kusten, baddaas oo ka tirsan Östersjön. Taasina waxaa keeni doontaa maaddooyinka fosforka iyo natajiinta oo baddaas ku bata. Waxayna saamayn ku yeelan kartaa degaanada u dhow oo ay dadku iska daayaan in ay dabaal u aadaan.
Waxaa hadda xilligaan kulaylaha Iswiidhen ku batay ubaxa fangaska. Wuxuuna ku sii fidayaa badda Östersjön, laakiin badda hoosteeda waxaa aad ugu sii yaraana noolaha.
Waxay ahayd sannadkii 2007 kolkii dalalka ku hareersan badda Östersjön ku heshiiyeen in la badbaadiyo badda ka dhexeysa, laakiin ilaa hadda ma jiro dal gaarey hadafkii lagu heshiiyey. Waxaana aad ugu soo batay maaddooyinkaas kiimikada ah.
Maamulka gobolka Västernorrland kama uusan hadlin kalluunkaas lagu beerayo degaanadooda, laakiin ugu horreyn bisha Agoosto ayaa lagu wadaa in ay go’aan ka gaaraan wixii laga yeeli lahaa codsigii la soo gudbiyey iyo welwelka dadweynuhu ka qabo kalluunkaas la beerayo.